people Nepal » चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले किन केपी ओलीसँग मात्र गरे गोप्य वार्ता ? चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले किन केपी ओलीसँग मात्र गरे गोप्य वार्ता ? – people Nepal
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले किन केपी ओलीसँग मात्र गरे गोप्य वार्ता ?
Posted on August 16, 2017 August 16, 2017 by Purna Nanda Joshi
३२ साउन,काठमाडौं – सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ भेटवार्ता र भ्रमणमा व्यस्त छन् । मंगलबार दिनभर उनी व्यस्त भए । सबै भेटवार्ता र कुराकानी सामुहिक भए । तर, एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भने उनले गोप्य वार्ता गरे।
केपी ओली निकट स्रोतका अनुसार ओली र वाङबीच आधा घन्टा वान टु वान अर्थात् दुई जनाको मात्र सहभागीतामा भेट भएको छ । अन्य नेता अर्थात् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेतासँग सामुहिक भेटवार्ता गरेका वाङले किन ओलीसँग मात्र वान टु वान वार्ता गरे ?
यो विषयमा नेपाली मिडियाले समेत केही लेख्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले भारतविरुद्ध कडा अडान लिएका थिए । ओली र वाङबीचको भेटवार्ता यही कारणाले मात्र नहुन सक्छ ।
नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुले समेत ओली र वाङबीचको गोप्य वार्तालाई महत्वका साथ लिए पनि यस बारे केही खुलासा हुन सकेको छैन । ओलीले समेत यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवासँग मन्त्री याङले छुट्छुटै भेटवार्ता गर्ने तयारी पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार याङले प्रधानमन्त्री देउवासँग उनको सचिवालय बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्ताका निम्ति बुधबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा मन्त्री याङलाई निम्तो दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि मात्र याङले साँझ राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने छन् ।
याङ नेतृत्वको टोलीले यस बीचमा विभिन्न निर्माण योजनाको उद्घाटनसँगै भेटवार्ता गरिसकेका छन् । बुधबार बिहान मात्र उनको टोलीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकको टोलीसँग भेटवार्ता गरिसकेको छ ।
मंगलबार मात्र नेता वााङले नेपालका बाढी पीडितका निम्ति १० लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको नेपाल भ्रमणकै समयमा बाढीले तराई क्षेत्रमा डुबाउँदा अबौको क्षति भएको छ ।